CAT S31, fahatsapana voalohany tao amin'ny IFA 2017 | Androidsis
CAT dia mpanamboatra manokana amin'ny fampisehoana ireo terminal eny ivelan'ny lalana. Ny làlan'ny terminal dia miavaka amin'ny fananana mari-pankatoavana miaramila izay miantoka fa ny vokatra dia hahatanty ny fikapohana na ny fianjerana, ho karazana fitaovana mety tsara hiasa amin'ny tontolo feno fankahalana na hanao fanatanjahantena mampientanentana.
Efa nomenay anao ny anay fahatsapana voalohany taorian'ny fitsapana ny CAT S41, iray amin'ireo telefaona natolotry ny mpanamboatra ao anatin'ny rafitry ny IFA any Berlin. Ankehitriny dia anjaran'ny CAT S31, ny kinova decaffeined indrindra izay misongadina amin'ny habeny voafehy kokoa sy ny fanamarinana miaramila 810G.
2 Toetra teknika CAT S31
Ny teboka manintona indrindra amin'ity finday ity dia ny fanoherana mafy ny toe-javatra ratsy. manomboka Ny CAT S31 dia misy fiarovana Corning Gorilla Glass miaraka amin'ny fanamarinana IP68 izay mamela hilentika hatramin'ny 1.2 metatra mandritra ny 35 minitra tsy misy olana). Izany dia tsy maintsy ampiana ny fanamarinana miaramila 810G izay miantoka ny fanoherana avo ny fanerena, ny mari-pana ary ny hovitrovitra mafy.
Raha jerena ny volavolan'ny CAT S31 dia mazava fa tsy telefaona mahazatra io. Amin'ity tranga ity dia mahita fitaovana iray isika izay azo ampiasaina amin'ny lamba lamba na amin'ny tara-masoandro feno. Misy koa a bokotra azo alamina pRaha te hampandeha ny Push to Talk, karazana maody walkie-talkie, jiro fandefasana jiro na handefa hafatra vonjy maika hanome ohatra vitsivitsy.
Araka ny efa hitanao, ny endriny matanjaka an'ny CAT S31 dia mamela anaomampiasa ny telefaona amin'ny tanana lena na fotaka misaotra an'ireo lakilen'ny fingotra voaomana ho amin'izany asa izany. Amin'ny ankapobeny dia telefaona natao hanoherana izy io ka aza manantena fitaovana kely na misy endrika mahafinaritra. Raha zavatra miavaka ny CAT S31 dia noho ny fanoherana azy fa tsy noho ny hatsaran-tarehiny.
Toetra teknika CAT S31
efijery 4.7 santimetatra HD narovan'ny Gorilla Glass 3
processeur Qualcomm Quad-Core 1.3 GHz
Storage 6 GB fitehirizana anatiny azo atsangana amin'ny alàlan'ny SD
Fakan-tsary miverina 8 Mpx
Fakan-tsary mialoha 2 Mpx
Fitaovana hafa IP68 voamarina / 810G Miaramila voamarina / Accelerometer / Gyroscope /
Amin'ny lafiny teknika, ny CAT S31 dia mandrakotra ny elanelam-potoana misy ity sehatra ity miaraka amin'ireo fiasa ahafahantsika miserasera amin'ny Internet, mampiasa tamba-jotra sosialy ary milalao lalao izay tsy mitaky enta-mavesatra be aza, fa kely fotsiny. Gaga aho amin'ny kalitaon'ny efijeryo Manolotra gamut miloko maranitra sy mazava izy, miampy ny mihoatra ny zoro fahitana azy.
Ny antsipiriany iray izay tena tiako dia ny hoe ny CAT S31 dia misy fenitra amin'ny Android 7.1 Nougat. Telefaona izay tsy mahagaga ara-teknika fa mihoatra ny mahafeno ny filan'ny ankamaroan'ny mpampiasa miaraka amin'ny fananana chassis tena mahazaka sy Bateria 4.000 mAh mampanantena fahaleovan-tena lehibe izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » IFA » CAT S31, fahatsapana voalohany tao amin'ny IFA 2017
OUKITEL dia mizaha ny androm-piainan'ny OUKITEL K3